WordPress: Ebumnuche 3 iji Wụnye Jetpack Ugbu a! | Martech Zone
N'abalị ikpeazụ m nwere obi ụtọ nke ịbụ ọbịa na #atomicchat Twitter nkata na-agba ọsọ site na ndị ijuanya na Nweta Atomic. Anyị na-atụle oke plugins maka WordPress na otu ngwa mgbakwunye nke m ga-eweta n'oge ole na ole bụ Jetpack.
Jetpack supercharges gị onwe ‑ kwadoro WordPress saịtị na egwu ígwé ojii ike nke WordPress.com.
Can nwere ike ịga na Jetpack maka saịtị WordPress maka nkọwa ndị ọzọ, mana isi atụmatụ 3 kwụpụtara m:
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgụ saịtị gị nke ọma na ekwentị mkpanaaka, ọtụtụ n'ime ndị ọbịa gị nwere ike ịgba gị ume. Ozi ọma ahụ bụ na ị gaghị etinye ọtụtụ ego na isiokwu ọhụụ ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye, WordPress ejirila isiokwu dị mma, nke dị fechaa nke na-arụ ọrụ dị egwu na igbe.
Ọ bụrụ na enwere m mkpesa ọ bụla, ọ ga - abụ na echekwaghị isiokwu ahụ na ndekọ isiokwu - yabụ ọ bụrụ na ịme mgbanwe ọ bụla, imelite ngwa mgbakwunye ga-ehichapụ ha. Ọzọkwa, nyiwe ngwanrọ mkpanaka dịka iTunes na-enye data meta na-egosipụta bọtịnụ nwụnye maka ngwa saịtị. Nke a ga-abụ nnukwu atụmatụ maka ngwa mgbakwunye a.
On Martech Zone, anyị nwere oku dị egwu iji rụọ ọrụ dabere na edemede. Ọ bụrụ na ị gụọ otu mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, sidebar na-egosiputa usoro mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ihe site na onye nkwado. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma mana achọrọ ka anyị tinye ngwa mgbakwunye nke anyị ka ọ rụọ ọrụ. Ọ bụghịkwa ọzọ! Jetpack abịa na a visibiliti nhọrọ nke na-enye gị ohere ịtọlite ​​iwu ndị dị mgbagwoju anya na oge igosipụta wijetị akọwapụtara.
Nkwalite mmekọrịta nke ọdịnaya gị abụghị nhọrọ ọzọ, ọ dị oke mkpa na atụmatụ niile. WordPress edozila ihe ịma aka a site n'ịgbakwunye ikike ịkwusa ozi gị na netwọkụ mmekọrịta gị. Ana m atụ anya na ha na-agbakwunye Google+ ma yikarịrị ka ọ ga-agbanwe blọgụ nke anyị gaa na ngwa mgbakwunye a ozugbo agbakwunyere ya. Anyị na-eji ugbu a WordPress na-echekwa ngwa mgbakwunye na nchekwa iji kekọrịta ozi anyị.
Ikekwe kacha mkpa na Jetpack bụ na ọ bụ nwa afọ WordPress ma wuru ya site na ndị mmepe WordPress. Nyere ogo nke ọtụtụ plugins na ahịa, ọ dị mma ịnweta akụ a tụkwasịrị obi! Wụnye Jetpack ugbu a ma were uru nke atụmatụ ndị a na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ!
Tags: ngwa wijetịmobile isiokwustatsvisibilitiWijetịwordpress plugin